एक जना सेक्स सम्बन्दी केही थाहा नभएको केटा को बिहे हुन्छ। सुहागरात मा के गर्नु पर्छ भनेर उस्लाई थाहा थिएन, त्यसैले तेतिकै सुत्छ । अको राती केटी आफ्नो एउता दुध देखाएर बस्छ। दुलहा : ला ! के भो तिमी लाई, के को फोका उठेको त्यो तिम्रो छाती मा ? भोली Doctor कहाँ गएर कातेर मिलाएर आउ है! अर्को राती केटी आफ्नो दुबै दुध देखाएर बस्छ। दुलहा : ला ! अर्को पनि फोका उथ्यो ? doctor कहाँ गऐनौ ! केटी लाई त अती भाई सकेको हुन्छ अनी अर्को रात माथि को छोपेर तल को पुती देखाएर बस्छ। दुलहा : ला ! बर्बाद भो ! माथि को फोको (दुध) कातेर मिलाएर आउ भनेको त, तल को पो कातेर आयो ।
एक जना केटा ले नयाँ छाला को जुत्ता किन्छ । Polish गरेर तिलिक्क तल्कने गरी लगाएर college जान्छ । एक जना जामा लगाएकी केटी को छेउ उभिन्छ । आफ्नो जुत्ता मा त्यो केटी को कट्टु को रङ हेर्छ र भन्छ, केटा : तिमी ले आज निलो कट्टु लगाएकी छेउ, हो कि होइन? केटी लाज ले भुतुक हुन्छे । भोली पल्ट, फेरी त्यही जुत्ता लगाएर college जान्छ । उही जामा लगाएकी केटी को छेउ उभिन्छ र भन्छ, केटा : तिमी ले आज चै रातो color को कट्टु लगाएकी छेउ, हो कि होइन ! तेस्रो दिन, त्यो केटी पेन्ती नलगाइ college आउछ र सोध्छ आज के लगको छु?
१ युवाति बसको ढोकाबाट छिरेको मात्र थियो कि सररर हावा चल्यो र हावाले युवातिको फ्रँक पुरै माथि उठाई दियो। उसलें पेन्टीनैं नलगाएको रहिछ। बसमा भएको सबै ढंग परें, ड्राइभर दाईलें कर्‍याक्क गर्दै २ सयको नोट निकालेर भन्यो,’ बहिनी ल पेन्टी किनेर लगाउ ।’ केटी रमाउदै ,’ थ्यांङ्क्यु’ भनि। भोली पल्ट सायद उसले आमालाई भनेछ क्यार, २ सय कमाउने बिचारलें आमा पनि विना पेन्टी निस्की, हावा पनि चल्यो, फ्रँक पनि उडायो ड्राइभर दाईले कर्‍याक्क गर्दै २ रुपैयाँको नोट दिदै भन्यो,’ दिदी लिनुहोस् ब्लेड किनेर खुरकेर फाल्नुहोस्’ ।
एकजना ब्यापारीको छोराले एसएलसि पास गर्यो । यस खुशीयालीमा उसले एककिलो लड्डु लगेर आफ्नो बाबुलाई दिँदै भन्योः
छोरोः बाबा, मैले गणीतको परिक्षामा १०० मा ९५ ल्याएँ ।
बाबु: नालायक, यो पनि खुशी हुने कुरो हो कहिँ ?
छोरोः १०० मा ९५ ल्याउनु भनेको एकदम राम्रो हो नि बाबा ।
बाबुः वाहियात, हामी सयको मालबाट १५० सम्म ल्याउँछौं, तैले भने १०० मा पनि ५ घटाइस् !!
पहिलो पटक खप्परध्वज शहरको एउटा भब्य पार्टीमा पुग्यो । डिनर लिइरहेको बेला आफ्नो छेउमा उभिएर बियर तानिरहेको एक ब्यक्तिलाई उसले भन्योः
खप्परध्व्जः कस्तो जमाना आयो । उ त्यो केटोलाई हेर्नोस् न, कस्तो पोशाक लगाएको होला, ठ्याक्कै
केटीजस्तो देखिन्छ !
ब्यक्तिः (उक्त ब्यक्तिले अलि रिसाएजस्तो गरी जवाफ दियो) माफ गर्नोस् महासय, त्यो केटी नै हो,
र उ मेरी छोरी हो ।
(खप्पर अलि अलि डरायो र भन्यो)
खप्परध्व्जः (खप्पर अलि अलि डरायो र भन्यो) सरी है हजुर, । तपाईँ उसको बुवा हो भन्ने कुरा
मलाई थाहा थिएन ।
ब्यक्तिः (ब्यक्तिले जंगिदै भन्यो) तपाईँ मसँग जिस्किदै हुनुहुन्छ कि क्या हो ? म उसको बाबु हैन,
आमा हुँ !
युवती युवकको लाँडो चुस्ने क्रममा :युवती : १००० दे नत्र टोक्दिन्छुयुवक : (१००० को नोट दिंदै) ५०० फिर्ता दे नत्र मुत्दिन्छु ।
श्रीमान : बिहेपछि त जीन्दगी कुकुरको जस्तो भैराछ ।श्रीमती : के को कुकुरको जस्तो हुनु नि कुकुरभन्दा पनि विजोग भने सुहाउँछ ।श्रीमान : किननी ?श्रीमती : अब कुकुरले १ घण्टासम्म नन्स्टप चिक्छ तिमि भने एक मिनेट पनि तग्न सक्दैनौ श्रीमान : बिहेपछि त जीन्दगी कुकुरको जस्तो भैराछ ।श्रीमती : के को कुकुरको जस्तो हुनु नि कुकुरभन्दा पनि विजोग भने सुहाउँछ ।श्रीमान : किननी ?श्रीमती : अब कुकुरले १ घण्टासम्म नन्स्टप चिक्छ तिमि भने एक मिनेट पनि तग्न सक्दैनौ
एकपटक प्रकाश पौडेल पिसावले च्यापेर हतार हतारमा ट्वाईलेट पसेछ र तर दुर्भाग्यवश त्यो त लेडिज ट्वाईलेट पो परेछ ।यत्तिकैमा त्यही ट्वाईलेटमा पिसाव फेर्दै गरेकी पुजना प्रधान बेस्सरी चिच्याईछन् : मुर्दार यो केटीहरुको लागि हो भन्ने थाहा छैन ?प्रकाश के गरुँ के गरुँ भएछ र हतार हतार मा प्यान्टको फस्नर खोली लाँडो देखाउँदै भनेछ : यो पनि त केटीहरुकै लागि त हो नि मोरी ।
श्रीमान श्रीमती रातिमा चिकिराखेको बेलामा छोरा विउँझिन्छ । छाराले आफ्नो बाबु आमाको चर्तिकला देखेर सरासर बाथरुममा गएर हस्तमैथुन गर्न थाल्छ ।यो देखेर बाउले छोरोलाई सोध्छ :बाबु : ओई गधा केगर्दैछस् हँ ?छोरो : के गर्नु नि म आफ्नो काम आफैं गर्दैछु म तपाईजस्तो थोडी अरुको आमालाई चिक्छु त ।
नेपालमा राम्रो आफ्नो कलाले स्थान नपाएकोले सीता (stripper sita) जस्तो हुन-हार यौन बेवासयी विदेशमा जानु परे को छ आखिर कहिले सम्म यो हेरी रहने हामीले वर्षमा हजारौ नेपाली यूवती हरु नेपाल चिकेर खान नपौने देखेर भारत, अमेरिका , जापान जस्ता तेस्रो मुलुकमा जानु परेको छ तर हाम्रो नेपाल सारकर भनी कान मा तेल हालेर बसिरहेका छन् उनिहरु पो बूढा छन् लादो थन्किन छोडी सक्यो तर नेपालमा १००००००० भन्दा बादी युवाहरु छन उनिहरु चिकन नपाएर लादो हल्ल्येर बस्नु परेको छ सरकारमा बसेकाहरु लाइ पनि कम चिकन मान लागे को छैन , अस्ती मात्र शभा-शध हरु रन्डी कोठीबाट सामतियको खबर सबै लाई थाहा छ अब उनिहरुलाई पनि चिकन मन लाग्दो रहेछ , यो रन्डी कोठी हरु बन्द गर्ने के नाटक गरिरहे को यो मुजी हरु ले डान्स रेस्टुरेन्ट हरु बन्द गरेर यो मचिक्नीहरुले के गर्न खोजिरहे को हो थाहा भएन र यो बाम देव भन्ने को पो लादो थान्किन. येश लाई चिकन मान लागेन भनेर अब सबै लाई चिकन नदिने ?चिक्नेपनि एउटा human right हो र यो मुजी ले यो हामी नेपालीहरु बाट हन्न गर्दै छ देश विकाश नहुनु को पनि प्रमुख कारण यो नै हो नेपाली केटिहरु विदेश मा गएर हजारौ कमाउ छन् र उनि हरु त्यो राष्ट्रलाई राजस्व संकलन गर्न मद्दत गरिरहे को छ यो condom मा लगाउने राजस्वको पैसा नै यो नेताहरुले खाइ रहेका छन् उनिहरुले indirectly चिकेको पैसा खादै छ तेही रन्डी हरु को बाट आयेको पैसा खाने र तेही रन्डीहरु लाई नै काम गर्न नदिने ? यो के चाला हो ? Angryयो कुरामापनि नागरिक समाज ले कुरा उठे राम्रो होला यो नेताहरु को एस्तै बानि बेहोरा ले गर्दा चिक्नु भनेको ठुलो अपराध जस्तो भाको छ|
ठन्केको लाडो र फुकेको पुत्ति बिच् मिलन गराइन्छ्।
ओठमा ओठ श्वास मा श्वासको एहेसास गराइन्छ।
छाती मा छात्ती टासेर न्यानो माया टुसाइन्छ ।
नसोच मलाई बेस्या भनेर पैसा त यहाँ सिधै जलाइन्छ।
चोखो मन भित्र देखी माया गर मलाई, यहाँ चिक्न पाईन्छ।
म सफा पानी पिउने सल्लाह दिन्छु,
कि त्यसमा लाज ?
दबेर हैन, खुलेरै भनौं
कुरै कुरामा यो कुरा चलाऔं
के अब पनि सेक्स तीन अक्षरमा
मात्र सिमित राखेर हुन्छ ?
राख्ने हो भने
तिम्रै, हाम्रै आगँनमा
AIDS रोगी फेला पर्न सक्छ…होश गरौ
शिक्षकले कक्षामा विद्यार्थीहरुलाई विवाहको बारेमा लेख्न लगाए । सबैले एक एक पेज विवाहको बारेमा लेखेर बुझाए । अन्तिममा श्यामले भने एक हरफ मात्र लेखेर बुझाए । उसले लेखेको थियो “विवाह एउटा सम्झौता हो, जहाँ केटाले व्याचलर डिग्रि गुमाउछ भने केटीले मास्टर हात पार्छन् ।
दुई जना स्कुले बालकहरु श्यामे र रामे स्कूल जाँदै गर्दा बटोमा गफ गर्दै:
श्यामे: अँ, हिजो त मैले अनौठो कुरा देखेँ नि !
रामे: के हो त त्यस्तो अनौठो कुरा ?
श्यामे: मैले हिजो कुखुराले अण्डा परेको देखेँ नि !
रामे: यस्तो सानो कुरा पनि सुनाउने हो ?
श्यामे: केको सानो कुरा ? सक्छस् भने तैँले पारेर देखा त ।
ब्लेड किनेर खुरकेर फाल्नुहोस्’
२०५३ सालको कुरा हो। म पहिलो चोटी काठमाण्डौ आएको थिए। त्यस ताका अहिलेको जस्तो माईक्रो बस थिएन, मिनी बसमा घुइचो हुन्थ्यो । एकदिन म अफिस जानें बेलामा घरबेटी साहुनीको छोरी पनि म सँगै जानें भनेर निस्की। मेरो अफिस उसको स्कुल जानें बाटो भएर जानु पर्थ्यो । हामी एउटै बसमा चढ्यौ । बसको ढोकाबाट छिरेको मात्र थियौ कि सररर हावा चल्यो र हावाले साहुनीको छोरीको फ्रँक पुरै माथि उठाई दियो। आम्मै उसलें त पेन्टीनैं नलगाएको रहिछे। बसमा भएको सबै ढंग परें, म पनि चुप । ड्राइभर दाईलें कर्‍याक्क गर्दै २ सयको नोट निकालेर भन्यो,’ बहिनी ल पेन्टी किनेर लगाउ ।’ केटी रमाउदै ,’ थ्यांङ्क्यु’ भनि। भोली पल्ट सायद उसले आमालाई भनेछ क्यार, २ सय कमाउने बिचारलें आमा पनि विना पेन्टी निस्की, हावा पनि चल्यो, फ्रँक पनि उडायो ड्राइभर दाईले कर्‍याक्क गर्दै २ रुपैयाँको नोट झिकी भन्यो,’ दिदी लिनुहोस् ब्लेड किनेर खुरकेर फाल्नुहोस्!
पक्कै पनि कोईबेला र्सूयले चन्द्रमालाई चिकेको हुनुपर्छ
त्यसैले त चन्द्रमामा दाग छ
दोस्रोपटक बरु र्सूयले चन्द्रमालाई नचिकेको हुनुपर्छ
त्यसैले त र्सूय आगो छ?
यौन सम्पर्क अचुक औषधी
भन्न अप्ठारो लाग्ने तर कुरा साचो हो है स्कटल्यान्डका स्वास्थ्य अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रतिवेदनअनुसार यौनसम्पर्कले स्वास्थ्यलाई सबभन्दा बढी फाइदा पुर्‍याउँछ। यौनसम्पर्कको निरन्तरताले ब्लडप्रेसरलाई नर्मल राख्नुका साथै मानसिक तनावमा समेत कमी आउने कुरा अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेका छन्। दुई दर्जन महिला र त्यत्तिकै संख्याका पुरुषहरूमा गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार जो वयष्कहरूले नियमित रुपमा यौनसम्पर्क राख्छन्, उनीहरू तनावको सिकार हुनबाट बच्ने गर्दछन्। यौनसम्पर्कले मानिसको मोटोपन रोक्नुका साथै घटाउन पनि मद्दत पुर्‍याउँछ। आधा घण्टाको यौनसम्पर्कले ८५ क्यालरिज वर्न हुन्छ। अमेरिकन एसोसिएसन अफ सेक्सयुलिटी एजुकेसर्न एन्ड थेरेपिस्ट्सका सभापति पौरी ब्रिटनका मुताबिक सेक्सले शारीरिक स्वास्थ्यका साथै मानसिक स्वास्थ्यलाई समेत फाइदा पुर्‍याउँछ। एक युरोलोजी इन्टरनेसनलको ब्रिटिस जर्नलमा छापिएको एक रिपोर्टमुताबिक सेक्सले पुरुषमा हुने प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ। रिपोर्टका अनुसार जो मानिस ३० वर्षभन्दा कम उमेरको छ, यौनसम्पर्कले भविष्यमा हुने प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा कम हुन्छ। जबकि, ३० वर्षभन्दा बढी उमेरका मानिसहरूले नियमित यौनसम्पर्क राख्दा प्रोस्टेट क्यान्सरको खतरा कम हुने कुरा अनुसन्धानकर्ताहरूले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। अनुसन्धानकर्ताहरूको दाबीअनुसार यौनसम्पर्क नियमित गर्नाले निद्रा राम्रोसँग लाग्छ। राम्रो निद्रा लाग्यो भने ब्लडप्रेसरलाई समेत मेनटेन गर्न मद्दत पुग्ने गर्छ। अनी भएन त अचुक औषधी
एक जना केटा ले नयाँ छाला को जुत्ता किन्छ । Polish गरेर तिलिक्क तल्कने गरी लगाएर college जान्छ । एक जना जामा लगाएकी केटी को छेउ उभिन्छ । आफ्नो जुत्ता मा त्यो केटी को कट्टु को रङ हेर्छ र भन्छ, केटा : तिमी ले आज निलो कट्टु (Penti) लगाएकी छेउ, हो कि होइन? केटी लाज ले भुतुक हुन्छे । भोली पल्ट, फेरी त्यही जुत्ता लगाएर college जान्छ । उही जामा लगाएकी केटी को छेउ उभिन्छ र भन्छ, केटा : तिमी ले आज चै रातो color को पेन्ती लगाएकी छेउ, हो कि होइन ! तेस्रो दिन, त्यो केटी पेन्ती नलगाइ college आउछ । जब केटा ले आफ्नो जुत्ता मा हेर्छ, अनी रुन थालछ । केटी ले किन रोएको भनेर सोध्छ, जवाफ मा भन्छ, केटा : मेरो जुत्ता फात्यो, मैले आफ्नै खुट्टा को औंला हरु देखें ।
एक जना सेक्स सम्बन्दी केही
एक जना सेक्स सम्बन्दी केही थाहा नभएको केटा को बिहे हुन्छ। सुहाग रात मा के गर्नु पर्छ भनेर उस्लाई थाहा थिएन, त्एसैले त्एतिकै सुत्छ। अको राती केटी आफ्नो एउता दुध देखाएर बस्छ। दुलहा : ला ! के भो तिमी लाई, के को फोका उठेको त्यो तिम्रो छाती मा ? भोली Doctor कहाँ गएर कातेर मिलाएर आउ है! अर्को राती केटी आफ्नो दुबै दुध देखाएर बस्छ। दुलहा : ला ! अर्को पनि फोका उथ्यो ? doctor कहाँ .................... है ! केटी लाई त अती भाई सकेको हुन्छ अनी अको रात माथि को छोपेर तल को पुती देखाएर बस्छ। दुलहा : ला ! बर्बाद भो ! माथि को फोको (दुध) कातेर मिलाएर आउ भनेको त, तल को पो कातेर आयो ।
२०५३ सालको कुरा हो। म पहिलो चोटी काठमाण्डौ आएको थिए। त्यस ताका अहिलेको जस्तो माईक्रो बस थिएन, मिनी बसमा घुइचो हुन्थ्यो । एकदिन म अफिस जानें बेलामा घरबेटी साहुनीको छोरी पनि म सँगै जानें भनेर निस्की। मेरो अफिस उसको स्कुल जानें बाटो भएर जानु पर्थ्यो । हामी एउटै बसमा चढ्यौ । बसको ढोकाबाट छिरेको मात्र थियौ कि सररर हावा चल्यो र हावाले साहुनीको छोरीको फ्रँक पुरै माथि उठाई दियो। आम्मै उसलें त पेन्टीनैं नलगाएको रहिछे। बसमा भएको सबै ढंग परें, म पनि चुप । ड्राइभर दाईलें कर्‍याक्क गर्दै २ सयको नोट निकालेर भन्यो,’ बहिनी ल पेन्टी किनेर लगाउ ।’ केटी रमाउदै ,’ थ्यांङ्क्यु’ भनि। भोली पल्ट सायद उसले आमालाई भनेछ क्यार, २ सय कमाउने बिचारलें आमा पनि विना पेन्टी निस्की, हावा पनि चल्यो, फ्रँक पनि उडायो ड्राइभर दाईले कर्‍याक्क गर्दै २ रुपैयाँको नोट झिकी भन्यो, दिदी लिनुहोस् ब्लेड किनेर खुरकेर फाल्नुहोस्’ ।
Posted by horney at 06:43